eHimalayatimes | स्वास्थ्य र शैली | थालासिमिया रोगी महिला बढी जोखिममा
14th December | 2018 | Friday | 2:00:01 AM
थालासिमिया रोगी महिला बढी जोखिममा
पार्वती थापामगर POSTED ON : Friday, 03 November, 2017 (9:42:59 AM)
काठमाडौं । थालासिमिया रोग लागेका पुरुषलाई भन्दा महिलालाई रगत पु¥याउन बढी कठिन हुने गरेको छ । महिलामा हरेक महिना हुने रजस्वलाका कारण उमेर बढ्दै जाँदा रगतको मात्रा पनि बढी आवश्यक पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ । यसैले थालासिमिया भएका पुरुषको तुलनामा महिलालाई रगत छिटोछिटो चढाउनुपर्छ ।
चिकित्सकका अनुसार यस्ता बिरामी महिलाको उमेर जति बढ्दै गयो उति नै उनको रगतमा ‘हेमोग्लोविन’ कम हुँदै जाने भएकाले उनीहरूलाई रहेक हप्ता छिटोछिटो रगत चढाउनु पर्छ ।
विपन्न परिवारका बिरामीलाई बढी समस्या हुने गरेको रौटहटकी कुञ्जना विहारीको अनुभव छ । उनकी १४ वर्षीया छोरी अनिषालाई हरेक हप्ता एक पोका रगत चढाउनु पर्छ । कहिलेकाहीँ त्योभन्दा बढी रगत आवश्यक पर्छ । महिनाबारी भएको साता बढी रगत आवश्यक पर्ने कुञ्जनाले बताइन् । समयमा रगत चढाउन नसके बेहोस भएर ढल्ने समस्या छ ।
कुञ्जनाले छोरीको उपचार नेपाल थालासिमिया समाजमा गराउँदै आएकी छन् । रगत आवश्यक परेको बेलामा कहिलेकाहीँ उनी आफैँले पनि दिने गरेको बताइन् । औषधिमा महिनाको ३ देखि ४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताइन् । सबै फार्मेसीमा औषधि नपाउँदा कहिलेकाहीँ समस्या पर्ने गरेको छ । उनले ज्यालामजदुरी गरेर छोरीको उचार गर्दै आएकी छन् ।
काठमाडौंको जोरपाटीकी २१ वर्षीया दीपा केसीले पनि थालासिमिया सोसाइटीमा उपचार गराउँदै आएकी छन् । जन्मेको डेढ वर्षको उमेरदेखि उनको उपचार हुन थालेको छ । उनलाई पनि महिनावारी भएका बेला रिंगटा लाग्ने र शरीर शक्ति नै नभएजस्तो हुने गरेको छ । महिनावारीको समयमा उनलाई दोब्बर रगतको आवश्यकता पर्छ तर उनलाई रगतको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । कहिलेकाहीँ हप्तामै दुई पोका रगत चाहिन्छ । औषधि त्यसैअनुसार बढी लाग्ने भएकाले आफूलाई निकै समस्या हुने गरेको दीपाको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘बुवाआमाले मेरो औषधि किन्न रकम जुटाउनुपरेको देख्दा आफैँलाई बोझ महसुस गर्छु ।’
यस्तै सर्लाहीका चन्दा राउतको समस्या पनि उस्तै छ । उनलाई पनि बढी ‘ब्लिडिङ’ भएको महिनामा झण्डै २ पोका रगत चाहिन्छ । समयमै रगत चढाउन नसके बेहोस भएर ढलिहाल्ने समस्या छ । गत चढाएसँगै औषधिको मात्रा पनि बढाउनुपर्छ ।
कान्ति बाल अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. अजित रायमाझीले थालासिमिया भएका बिरामीलाई सुरुमा रुघाखोकी लागेजस्तो हुने, जिउ दुख्ने, थकाइ महसुस हुने, हिँड्न नसकी बेहोस हुने, हातगोडा सुन्निने, वाकवाकी लाग्नेजस्ता लक्षण देखा पर्छन् । यस्ता बिरामीलाई रगत चढाउन ढिला भयो भने ज्यान जाने जोखिम हुन्छ ।
डा. रायमाझीका अनुसार आमाको गर्भमै हुँदा बच्चा थालासिमियाको रोगी हुन्छन् । बच्चा गर्भमा रहनुभन्दा पहिले नै आमा र बाबु दुवैको ‘जिन’ स्वस्थ्य आयो भने बच्चा स्वस्थ्य हुन्छ । आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकको अस्वस्थ्य ‘जिन’ बच्चामा आयो भने सो बच्चा थालासिमियाका रोगी भएर जन्मिन्छन् । थालासिमिया भएका महिलालाई विवाहपछि बच्चा जन्माउन पनि बढी समस्या हुन्छ ।
अहिले थालासिमिया सोसाइटीमा नियमित रगत चढाउने सेवाग्राही १२५ जना रहेको अध्यक्ष दुर्गा पाठकले बताए । जसमध्ये ३४ प्रतिशत महिला छन् । सोसाइटीले यस्ता बिरामीलाई निःशुल्क रगत दिँदै आएको छ । नेपालमा थालासिमिया भएका बिरामीको सरकारी तथ्यांक छैन ।